SomaliTalk.com » Qarax Ismidaamin ah oo ka dhacay Xero ay degenaayeen Ciidamada Daraawiishta Dowladda Federaalka
Qarax Ismidaamin ah oo ka dhacay Xero ay degenaayeen Ciidamada Daraawiishta Dowladda Federaalka
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Monday, February 21, 2011 // Jawaabaha waa la xiray
﻿Iyadoo maalmahan Magaalada Muqdisho ay ka yara nasatay qaraxyada ismiidaaminta, oo uu ugu dambeeyey qarixii ka dhacay Garoonka Diyaaradaha Muqdisho ee sanadkii hore, hase yeeshee maanta oo Isniin ah ayaa gaari nooca loo yaqaano Dhayna, oo ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa waxa uu galay xeray horey loo oran jiray Saranji oo ay ku jiri jireen ciidanka Daraawiishta gaar ahaan kuwa Fardoowleyda, waxayna xeradaani ku taala agagaarka Dekedda weyn ee Muqdisho, waxayna xeradaani u dhow dahay dugsiga sare ee Booliiska.
Qaraxaan ayaa waxaa la sheegay in ay fuliyeen afar qofood oo mas’uuliyiinta dowladda FKMG qaarkood ay sheegeen in ay ku jirtay Haweenay, waxaana qaraxaasi ku geeriyooday ilaa iyo 15 qofood oo isugu jiray dad rayid ah iyo ciidan, iyadoo ay ku dhaawacmeen ilaa 30 qofood oo qaarkood xaaladooda laga deyrinayo.
Goobtii uu ka dhacay qaraxu ayaa waxaa booqday mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda FKMG oo ay ku jiraan Wasiirka Arimaha Gudaha C/shakuur Macalin Xasan, Wasiirka Gaashaandhiga C/Xakiin Sheekh Faqi, waxayna sheegeen in qaraxaani uu ahaa mid fuleynimo ah iyagoo sheegay in qaraxaani ujeedadiisu ahayd in lagu jeediyo indhaha shacabka, maadaama dagaalo qaraar ay dhex marayaan xarakada Al-shabaab iyo ciidamada Dowladda FKMG oo garabsiinayaan AMISOM.
Afhayeenka Xarakada Shabaabul Mujaahidiin Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere) ayaa waxay sheegeen in ay iyagu ka dambeeyeen qaraxaasi isagoo sheegay in ay ku dileen askar farabadan kuwaas oo uu sheegay in la doonayey in maalmaha soo socda la soo geliyo dagaalada ka socda Muqdisho, isagoo ku tilmaamay qaraxaasi mid lagu dhabar-jabiyey qorshihii lala damacsanaa.
Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda FKMG ayaa iyana waxay booqdeen isbitaalada la dhigay dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi gaar ahaan isbitaalada Madiina iyo Martini, iyagoo sheegay in Dowladda Federalka ay ka gacan siin doonto sidii ay u heli lahaayeen caafimaad buuxa.
Dhinaca kale waxaa maalintii saddexaad galay dagaalada u dhexeeya Ciidamada AMISOM oo gacansiinaya kuwa Dowladda Federaalka iyo Xarakada Shabaabul Mujaahidiin, waxayna labada dhinac weli isweydaarsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan, waxayna khasaaro ka soo gaartay dad rayid ah dagaalkaasi.
DFKMG waxay qaraxa ka soo saartay laba warsaxaafadeed… HOOS KA AKHRI…
WD: Amiin Yuusuf Khasaaro
War Saxaafadeed 012/2011
Xukuumadda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay is-miidaamintii maanta
(Muqdisho – Febraayo 21, 2011) Faahfaahin dheeri ah ayaa ka soo baxaysa weerarkii ismiidaaminta ahaa ee maanta oo Isniin ah ka dhacay Muqdisho. Booliiska ayaa xaqiijiyay in 11 qof ay geeriyoodeen, halka 40 kalena ay ku dhaawacmeen weerarka dad naftood-halligeyaal ah ay ku qaadeen xarun booliis oo ku taalla degmada Xamar Jajab. Dadka ay wax soo gaareen waxaa ka mid ahaa gerida laba carruur ah oo kala jiray 10 iyo 11 sano, iyo dhaawaca cayaartoy iyo rayid kale.
Gaashaanle Cabdullaahi Xasan Bariise oo ah afhayeenka ciidanka booliiska ayaa sharraxaad ka bixiyay sida uu weerarku u dhacay. Afar qof oo ay ka mid ahayd haweeney ayaa gaari noociisu yahay ‘Dhayna’ oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa ku soo weeraray xerada saacaddu markay ahayd 8:30 subaxnimo xilliga Muqdisho. “Askari geesi ah ayaa naftiisa u huray oo joojiyay, markii ay diideen inay joogsadaana toogtay, taasoo keentay inay markiiba isqarxiyaan.” “Waxaa sharaf mudan askarigii argagixisada ka celiyay inay galaan xerada. Haddii ay geli lahaayeen xerada, khasaaruhu intan wuu ka badnaan lahaa.”
Madaxyada iyo lugihii kuwii is qarxiyay ayaa laga helay goobta, iyadoo gaarigiina uu dambas isu beddelay.
Ra’iisul-wasaare-ku-xigeenka, ahna wasiirka Gaanshaandhigga, Wasiirka Arrimaha Gudaha & Amniga Qaranka, iyo Wasiirka Warfaafinta, Boostada & Isgaarsiinta oo maanta si wadajir ah u booqday isbitaal Madiina ayaa hay’adaha ay khuseyso weydiistay inay daweyn caafimaad oo wanaagsan siiyaan dadka dhaawacmay.
Mudane Cabdulxakiim Maxamuud, Ra’iisul-wasaaraha ayaa warbaahinta u sheegay in weerarkaasi ay ka dambeysay kooxda Al-Qaacida maadaama aqoonta lagu diyaariyay aysan lahayn dadka Soomaalida ah.
“Falkan waxashnimada ah ee Al-Shabaab wuxuu muujinayaa cadowtinimada argagixisada iyo fulaynimadooda, kuwaasoo caado u ah. Mar kasta oo ay ku jabaan goobaha dagaalka, waxay beegsadaan bar-tilmaameedyo jilicsan” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta, Mudane C/kariim Xasan Jaamac. “Halka ay dowladdu ka fekereyso, kana shaqeyneyso horumarka, argagixisadu wax kale kama shaqeeyaan aan ka ahayn geeri, burbur iyo dhac.”
Wasiirradu waxay sheegeen in Xukuumaddu marnaba ka waaban doonin ilaalinta dalka hooyo, iyadoo falalka noocaan oo kale ahna aysan ka niyadjebin doonin inay ciribtiraan xagjirnimada.
Isha warka: Wasaaradda Warfaafinta, Boostaha & Isgaarsiinta , Xafiiska Xiriirka Warfaafinta
Address: MIPT Headquarters, near Villa Somalia, Mogadishu, Somalia
Tel: +252-50-941 040
War Saxaafadeed 011/2011
Dowladda Soomaaliya oo cambaareysay weerar argagixiso ah
(Muqdisho, Febraayo, 21, 2011) Xukumadda Soomaaliya ayaa maanta si xooggan u cambaareysay weerar naftii-halligis ah oo lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaalla Muqdisho. Xukuumaddu waxay muujisay sida ay uga naxday khasaaraha nafeed ee halkaasi ka dhashay.
Toddobo qof ayaa naftooda ku waayay weerarka, iyadoo 35 kalena ay ku dhaawacmeen. 15 ka mid ah dhaawaca isbitaalka waa laga bixiyay kaddib markii la daweeyay, iyadoo 20 kalena ay weli isbitaalka ku jiraan. Dadka dhintay waxaa ka mid ah laba carruur ah oo kala jiray 10 iyo 11 sano jir oo ka ag dhowaa goobta.
Dadka dhaawacmay waxaa ka mid ahaa dad rayid ah oo ay ka mid ahaayeen dad meesha ku sameynayay orod jimicsi ah.
Wasiirka Warfaafinta, Boostaha iyo Isgaarsiinta, ayaa yiri:
“Wuxuu ahaa weerar fulaynimo ah. Kooxda xagjirka ah waa caadadooda in mar kasta oo ay ku jabaan goobaha dagaalka inay bar-tilmaameedsadaan meelo jilicsan.”
“Hase ahaatee ciidankeenu kuma niyad-jabayo falalka qaska ku dhisan, wayna sii wadi doonaan tallaabooyinka ay ka qaadayaan inay dalka ka baabi’iyaan xagjirka iyo argagixisada.”
Xukuumaddu waxay tacsi u direysaa qoysaskii dhibaatadu ka soo gaartay weerarka, iyadoo Alle uga baryeysa inuu samir iyo iimaan ka siiyo.
Weerarkan ayaa imanaya maalmo kaddib markii Al-Shabaab ay ku weysay saraakiil sare oo shisheeye ah iyo dagaalyahanno Soomaali ah kaddib markii ciidanka Dowladda iyo AMISOM ay qaadeen howlgallo.
ISHA: Ministry of Information
Faafin: SomaliTalk.com // Halkudheg: DFKMG, Qarax